माइक्रोसफ्टको लेटेस्ट Surface Pro X सार्वजिनक, १५ घण्टाको ब्याट्रि लाइफ ! AahaKhabar
माइक्रोसफ्टको लेटेस्ट Surface Pro X सार्वजिनक, १५ घण्टाको ब्याट्रि लाइफ !
एजेन्सी, २९ असोज । माइक्रोसफ्टले अन्तमा भारतमा सर्फेस प्रो एक्स (Surface Pro X) ल्यापटप लञ्च गरेको छ । यस नयाँ विन्डोज बेस्ड टु इन वान ल्यापटपको मुख्य विषेशताहरु १५ घण्टाको ब्याट्रि लाइफ, १३ इञ्चको स्क्रिन, माइक्रोसफ्ट एस क्यू २ प्रोसेसर लगायतका फिचर्स दिइएको छ ।
यसको २५६ जीवी एसएसडी कार्ड भेरियन्टको मूल्य भारतमा १,४९,९९९ भारु तोकिएको छ, भने ५१२ जीवी भेरियनटको मूल्य १,७८,९९९ भारु तोकिएको छ । यस ल्यापटप प्लेटिनम र ब्ल्याक कलर अप्सनमा बजारमा उपलब्ध छ ।
यसका साथै, कम्पनीले आफ्नो सिग्नेभर किबोर्ड पनि लगाएको छ, जसलाई सर्फेस प्रोको साथमा जोडिनेछ । सिग्नेचर किबोर्डलाई प्लेटिनम, आइस ब्ल्यू र पोपी रेड कलर अप्शनमा उपलब्ध गराइएको छ । सर्फेस प्रो एक्स र सिग्नेचर किबोर्ड दुवैलाई अधिकृत रिलेशनको माध्यमबाट उपलब्ध गराइएको बताइएको छ ।
माइक्रोसफ्ट प्रो म्याक्स २०२० को वजन ७७४ ग्राम रहेको छ । यस ल्यापटप सबै भन्दा पातलो, सबै भन्दा हल्कार र सबै भन्दा पावरफुल टु इन वान भएको कम्पनीको दाबी छ ।
माइक्रोसफट् सर्फेस प्रो एक्स २०२० मा १३ इञ्चको पिक्सल सेन्स डिस्प्ले दिइएको छ, जसको रिजोलुशन २८८० इन्टु १९२० पिक्सल रहेको छ । यो माइक्रोसफट् एस क्यू २ प्रोसेसरमा रन हुन्छ, जसलाई कम्पनीले क्वालकमको साथ मिलेर डेबेलप गरेको हो ।
डिवाइसमा १६ जीवी ¥यामको साथमा एड्रेनो ५९० जीपीयू दिइएको छ । यस ल्याटप भारतमा सार्वजनिक भएसँगै नेपाली बजारमा पनि चाँडै उपलब्ध हुने बताइएको छ ।